Xisbiga Rajo Soo Celinta Shacabka Ee Waddani W/Q Maxamuud Xeef | Baligubadlemedia.com
Xisbiga Rajo Soo Celinta Shacabka Ee Waddani W/Q Maxamuud Xeef
Waa sannado badan oo ay dalka soo mareen, arimo kala duwan oo lama ilaawaan ah kuwaas oo ahaa sicir barar, abaaro iyo siyaasad xumo gudaha iyo debadaba ah. Waxaana weli taagan dhibaatada dhamaan raadadkaas aynu soo xusnay oo idil ay ku reebeen dalka iyo dadka iyadoo aanay welina jirin wax xal ah ama raadkiisa leh oo wax lagaga qabtay amaba lagu xaliyey dhibaatooyinkaas.
Dadku waxay ku jiraan jawi qasan oo jaah wareer ah, waxaanay mar uun ku haminayaan cid ka saarta dhibta haysata ee isugu darsantay, waxaana si isku mid ah u dareemay dadka magaalooyinka iyo ku miyiga oo xiliyada qaar isku baxsan jiray iskuna tiirsanaa.
style=”font-size:16px;”>Waxa sare u kacday maciishada, waxaana sabab u ah ganacsatada oo dawlada libin ka helaysa iyo awoodii dawladeed oo si khaldan loogu tagrifalay, waxaana sameysmay gacan saar dadka rayidka ah loogu heshiiyey, iyada oo ay ugu sii daran tahay bulshada qeybteeda dabaqada hoose loo yaqaan oo gebi ahaaba meesha ka baxday waxaa halis ku jirta dabaqada labaad oo dhaqaale ahaan wakhtigan aad u liidata kuna dhaw inay hoos ugu dhaadhacdo booska koobaad.
Qabyaalada, musuqmaasuqa, eexda, iyo wadaniyad daradda ayaa iyana ah waxyaaba ugu waa weyn ee xiligan ka taagan dalka, oo iyana u baahan wax ka qabasho deg deg ah iyo in dalka laga samato bixiyo arimahaas oo keeni kara qaran dumis iyo dulmi bulsho oo baaxadiisa leh, iyo cawaaqib aan laga soo waaqsan karin.
Qabyaalada ayaa sare u kacday waxaanay gaadhay halkii ugu sareysay adeegsigeeda tan iyo intii xukuumada maanata ay talada dalka Somaliland haysay iyada oo xitaa xafiisyadii dawlada qaarkood qabiilo gaar ahi ay yeesheen.
Musuqmaasuqa ayaa isna ah mid si weyn xilligan dadku u dareemayaan iyada oo lacago badan iyo hanti dawladeed ay maqan yihiin kuwana dalal shiisheeye loo gacan geliyey, waxaana sii raacda eexda oo dadka qaarna la soo kala dhaweysanayo hab qabiil ama weji ah, oo aanay aqoon shaqeynayn waana ta keentay in dhalinyaro badani ay dalka ka tabriibaan, halka qaarkood ay fadhiyaan goobaha bulshadu ku kulanto ee fadhi ku dirirka loo yaqaano, qaar kalen aay ku jiraan xabsiyo rajo la’aan ah, qaarna la la yahay nolol iyo geeri. Waxaana u sabab ah, shaqo la’aan iyo musuqmaasuq.
Dadka waxa kale oo haysata wadaniyad darro muuqata iyada oo ay adeegsadaan odhaahda ah “ Maxaa, Iga Galay”, taasina waxa sabab u ah maamulka ama cida markaas xukunka haysa oo ka gaabisay in dadweynaha lagu wacyi geliyo wadan jaceylka iyo wadaniyadda, waana mid ka maqan in lagu dhigo tacliinta dugsiga illaa heer jaamacadeed.
Ugu danbey, waxa arimaahaas iyo kuwo kale oo badan, wax ka qabanaya xisbiga rajadda shacabka ku suntan ee waddani, ku dooro balan iyo wax qabad dhab ah oo aan ahayn lab la kac.